सत्ता डगमगाउने डरले जयसिंह धामीको प्रतिवेदन गुपचुप ! - Nijgadh News
सत्ता डगमगाउने डरले जयसिंह धामीको प्रतिवेदन गुपचुप !
२०७८ भाद्र १५, मंगलवार १७:४७
नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीले अहिले कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनेको र यस्तो ‘कम्फर्टेबल’ सरकार जयसिंह धामी जस्ताको हत्या लुकाउन ‘कम्फर्टेबल’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले घटनाबारे छानबिन गरेको यथार्थ प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
सांसद अधिकारीले भने, ‘जसले हाम्रो नागरिकको हत्या गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले जुन लापरबाही र ढिलासुस्ती गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो खेद छ । सरकारको यो अकर्मण्य कामको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ । सरकारलाई ‘कम्फर्टेबल’ बनाउनका लागि प्रतिवेदन बाहिर नआउन पनि सक्छ । अरूको इसारामा बनेको प्रतिवेदनले सत्य कुरा बाहिर नल्याउने पनि हुन्छ । यस्ता धेरै घटना देखिरहेका छौँ ।’
भदौ १० गते: मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धामीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ।